Zvigadzirwa Vagadziri & Vanotengesa - China Zvigadzirwa Fekitori
Disposable inodzivirira mask
Betsero:mweya wakanaka kwazvo; Inogona kusefa mweya une muchetura; Kugona kubata kupisa; Inogona kutora mvura; Inogona kuva isina mvura; Anochinjika; Kwete unkempt; Inzwa zvakanaka uye yakanyorova; Kuenzaniswa nemamwe masks, iwo maratidziro akapusa Yakanyanya elastic, inogona kuderedzwa mushure mekutambanudza; Mutengo wakaderera, wakakodzera kugadzirwa kwemasasi.
KN95 level inodzivirira mask yekuisa bag
Yakavakwa-mupurasitiki yemhino clip, inokodzera marudzi ese echiso.
Divi mbiri rakasimba dhiraivha yekuzviparadzanisa, zvinobudirira kudimbura mweya kumativi ese
Pasi peiyo yekuzvimirira yega, inoshanda clearance shaya yakafa Angle.
Anorasa Zvisina tsvina Powder-isina magurovhosi
Hapana poda kurapwa kuderedza allergies
Iyo inogona kudzivirira mukana wekusangana kusvibiswa kunokonzerwa nehupfu magurovhosi uye nekuderedza zvakanyanya zviitiko zvemakwenzi
Kumusoro kwemagurovhosi kwakatemwa zvishoma kuti uwedzere kupokana
Magurovhosi akagadzirwa nenzira chaiyo uye haabudi
1. 75% doro ruoko sanitizer sanitiser gel zvinobudirira inouraya kupfuura 99.99%, kwete kukuvadza ruoko rwako
2. Inogona zvinobudirira uye nekukurumidza
3. Nyoro uye isingatsamwisi, haina kukuvadza ganda
Usashambidza nemvura, zviri nyore kuchengetedza mvura
4. Gel mavara, iwe unogona nyore kudzora huwandu. Saizi diki, yakapusa kutakura
Kn95 uye N95 respirators vane mwero wakaenzana wekudzivirirwa, asi tevera chete miedzo yekuyera nyika dzakasiyana. Kn95 masks anotevera maChinese zviyero uye maN95 masks anotevedzera maitiro eAmerica. Dziviriro yavo yekushanda kweasina mafuta maseleti (sodium chloride particles yekuyedza) haisi pasi pe95%.
Disposable yekudzivirira mbatya inoreva zvinhu zvinogadziriswa zvekudzivirira zvinopfekwa nevashandi vekiriniki pavanosangana nevekirasi A kana chirwere chinotapukira varwere vari pasi peClass A chirwere chinotapukira.
Iyo yakanyungudutswa jira ndiyo yakakosha midziyo yemasasi. Chinhu chikuru chemicheka yakanyungudutswa nemucheka ndeye polypropylene.
Sezvinoreva zita iri, iri rakatetepa rabha rakashandiswa mumasiki kugadzirisa mask pane bhiriji yemhino.
Nekudaro, bhiriji remhino rinonzi zvakare rizere purasitiki bhiriji yemhino - iyo mbabvu yemhino - bhiriji yemhino.
Iko kushanda kwekuzadza kwemweya hunhu hwemask mask yetambo.
Munzvimbo inopisa uye ine hunyoro hwekushanda isina huturu hwemhepo kana yakakura yevashandi, kushandiswa kwean anti haze mask ine mweya wekufema kunogona kukubatsira kuti unzwe kugadzikana kana uchiputika.
Isu tiri nyanzvi inobata mumaski, disinfectants, bacteriostatic solution, mabhakitiriya emagetsi, veterinary drug research nekuvandudza, kugadzira nekutengesa kwamabhizinesi epamusoro.
Adress: Kumadokero kweYeai nzira uye kuchamhembe kweYongkang mumugwagwa, Weifang Economic Development Zone
Runhare: + 86-18653608018
China chave chigadzirwa chikuru uye ...
China yakasimbisa mirau pane ex ...
China yakasimbisa zviyedzo zvekuongorora ...